Na-asọpụrụ Gastón Cornejo Bascopé - World March
Can nwere ike ịgba akwụkwọ ugbu a akwụkwọ nke njem ụwa nke abụọ
Ndị Ọrụ Na-emekọrịta Ọrụ
Ndị isi ụlọ
Akwụkwọ ozi maka ụwa nke enweghị ike ime ihe ike
Ụbọchị na-emeghị ihe
Nzukọ na ụdị nke nhazi
Ndepụta ihe merenụ
Latin American March
Nzukọ na Nzukọ
Nkwenye nke gbasara iwu
Pịa Ihe edeturu
Ụlọ akwụkwọ akụkọ
Na-arụkọ ọrụ ọnụ
Ngalaba Oha obodo
Ntughari akwukwọ nduzi
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Na-asọpụrụ Gastón Cornejo Bascopé
Na-asọpụrụ Gastón Cornejo Bascopé
08 / 10 / 2020 07 / 10 / 2020 site Antonio Gancedo
Na ekele Gastón Cornejo Bascopé, onye na-enwu enwu, onye dị anyị mkpa.
Dr. Gastón Rolando Cornejo Bascopé nwụrụ n'ụtụtụ Ọktoba 6.
Amuru ya na Cochabamba na 1933. O biri oge nwata ya na Sacaba. Ọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji na Colegio La Salle.
Ọ gụrụ ọgwụ na Mahadum Chile na Santiago gụsịrị akwụkwọ dị ka Onye Ọrịa.
N'oge ọ nọ na Santiago, o nwere ohere izute Pablo Neruda na Salvador Allende.
Ahụmahụ mbụ ya dị ka dọkịta nọ na Yacuiba na Caja Petrolera, emesia ọ bụ ọkachamara na Mahadum Geneva, Switzerland na Mahadum Patiño.
Gastón Cornejo bụ dibia, onye na-ede uri, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme, onye agha aka ekpe na onye sinetọ nke MAS (Movement for Socialism) nke onye mechara si na ya wezuga onwe ya, na-agbachi nkịtị n'okwu nke akpọrọ "Usoro nke mgbanwe na Bolivia".
Anaghị m ezobe mmekọrịta ya na Marxism, mana ọ bụrụ na omume ọ dị mkpa ịkọwa ya, ekwesịrị ime ya dị ka onye hụrụ Humanism n'anya na onye na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi.
Onye na-ahụ n'anya, nke nwere oke nghọta nke mmadụ, nwere nghọta na anya dị nso, onye nwere ọgụgụ isi na-arụsi ọrụ ike, maara ihe banyere ala nna ya Bolivia, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme, onye na-enye aka na Cochabamba edere ederede na onye na-enweghị ike ide akwụkwọ.
Ọ bụ onye nọ na gọọmentị izizi nke Evo Morales, n'etiti ọrụ ya ndị pụtara ìhè na-esonye aka na ntinye ederede nke Iwu nke State Plurinational State nke Bolivia ugbu a, ma ọ bụ mkparịta ụka ndị dara ada na Gọọmentị nke Chile iji nweta ụzọ mbata ekwere na Pacific Ocean .
Kọwa Dr. Gastón Cornejo Bascopé dị mgbagwoju anya n'ihi ọdịiche dịgasị iche iche nke o ji rụọ ọrụ, njirimara nke ya na ndị a na-enwu enwu, ndị dị anyị mkpa.
Bertolt Brecht kwuru, sị: “Enwere ndị nwoke na-alụ ọgụ otu ụbọchị ma dị mma, enwere ndị ọzọ na-alụ ọgụ maka otu afọ ma ka mma, enwere ụmụ nwoke ndị na-alụ ọgụ ọtụtụ afọ ma dị ezigbo mma, mana enwere ndị na-alụ ọgụ oge niile, ndị ahụ bụ ihe dị mkpa"
Mgbe ọ ka dị ndụ, ọ natara ọtụtụ onyinye maka ogologo ọrụ ahụike ya dị ka gastreontorologist, kamakwa dị ka onye edemede na ọkọ akụkọ ihe mere eme, gụnyere nke National Health Fund, na August 2019, na Esteban Arce dị iche iche nke ndị ọchịchị obodo nyere, na 14 Septemba nke afọ gara aga.
N'ezie, anyị nwere ike ịnọ na nnukwu usoro ọmụmụ na omimi ya na obosara ya, mana anyị ndị dị ka ya chọrọ ụwa Udo na ime ihe ike, Mmasị anyị bụ na ọrụ ha kwa ụbọchị, na ndụ mmadụ ha kwa ụbọchị.
N’ebe a kwa ka idi-uku-ya ba uba dika agāsi na ọ di nnuku nnyo.
O nwere ndị enyi ebe niile na obodo niile; bụ, n'ọnụ ndị ikwu ya, dị nso, mmadụ, ụdị, nwee nsogbu, na-akwado, na-emeghe, na-agbanwe agbanwe… Onye pụrụ iche!
Anyị ga-achọ ịkọwa ya ma cheta ya dịka ọ kọwara onwe ya n'edemede ahụ, "silo", E bipụtara na weebụsaịtị Pressenza na 2010, na ebe nchekwa nke Silo mgbe ọ nwụsịrị:
"Ajuju ajuju banyere onye m maara dika onye okacha amara mmadu. Nke a bụ nkọwa ya; Inbụrụ na obi m nọ na ngagharị nke mmekọrịta mmadụ na eze mana mmadụ na-eme ka ọ baa ọgaranya mgbe niile, nwa amaala nke aka ekpe na-asọpụrụ usoro nke okike mba ụwa nke ime ihe ike na ikpe na-ezighị ezi, onye na-eri ihe ime mmụọ, onye mebiri Nature na oge nke ịdị adị; ugbu a ekwenyesiri m ike n'ụkpụrụ Mario Rodríguez Cobos kwusara.
Ka onye obula muta ozi ya ma mee ya ka o juputa na Udo, Ike na onu! Nke ahụ bụ Jallalla, ekele dị ebube, mkpụrụ obi, ajayu nke ụmụ mmadụ na-ezute."
Dr. Cornejo, daalụ, daalụ maka nnukwu obi gị, nghọta gị doro anya, maka ịme ka ị mata ihe omume gị ọ bụghị naanị ndị kacha gị nso, kamakwa ọgbọ ọhụrụ.
Daalụ, otu puku na-ekele maka omume gị nke ịkọwapụta na-adịgide adịgide, ịkwụwa aka ọtọ gị na maka itinye ndụ gị na ọrụ nke mmadụ. Daalụ maka mmadụ gị.
Site na ebe a, anyị na-ekwupụta ọchịchọ anyị ka ihe niile na-aga nke ọma na njem ọhụụ gị, ka ọ bụrụ nke na-enwu gbaa na enweghị njedebe.
Maka ezinụlọ gị kachasị nso, Mariel Claudio Cornejo, Maria Lou, Gaston Cornejo Ferrufino, nnukwu mmakụ na ịhụnanya.
Ndị anyị bụ ndị sonyere na World March, dị ka ụtụ maka nnukwu onye a, chọrọ icheta okwu nke o ji kwupụta n'ihu ọha na ya na-agbaso World World March maka Peace na Nonviolence bipụtara na weebụsaịtị nke 1M World March:
Ozi onwe onye na-agbaso World March maka Peace na Nonviolence si Gastón Cornejo Bascopé, onye isi oche nke Bolivia:
Anyị na-atụgharị uche mgbe niile na ọ ga-ekwe omume inwe nwanne ka ukwuu n'etiti ụmụ mmadụ. Ọ bụrụ na okpukperechi, echiche, steeti, ụlọ ọrụ nwere ike ịnye ụkpụrụ nkwekọrịta zuru oke, nke kachasị elu na nke ụwa niile iji nweta ụwa mmadụ niile na mbara ụwa.
Nsogbu: Na mbido narị afọ nke iri abụọ na otu a, ọchịchọ gọọmentị na-achọ maka ịdị n'otu na nchebe ka ukwuu na uto omume igwe mmadụ a na-achịkwaghị achịkwa, agụụ, ọrịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mpụga mmadụ na nrigbu, mbibi nke Nature, ọdachi ndị na-emere onwe ha, doro anya. ọdachi nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, ime ihe ike na mwakpo ndị agha na-akpasu iwe, ntọala ndị agha nke alaeze ukwu ahụ, ịmaliteghachi ọchịchị a anyị na-edebanye aha taa na Honduras na-akagbu Chile, Bolivia na mba ndị na-eme ihe ike ebe ihe ọjọọ malitere ya. Egbugharị ụwa dum na nsogbu na mmepeanya.
N'agbanyeghị mmepe nke ihe ọmụma, sayensị, teknụzụ, nkwukọrịta, akụnụba, gburugburu ebe obibi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọbụna ụkpụrụ omume, ha nọ na nsogbu na-adịgide adịgide. Nsogbu okpukpe nke ịtụkwasị obi, nkwenkwe, ịgbaso usoro ndị oge ochie, iguzogide mgbanwe usoro; nsogbu akụ na ụba ego, nsogbu obibi, nsogbu ọchịchị onye kwuo uche ya, nsogbu omume.
Nsogbu akụkọ ihe mere eme: Soldị n'otu n'etiti ndị ọrụ nwere nkụda mmụọ, nrọ nke nnwere onwe, ịha nhatanha, mmekọrịta nwanne, nrọ nke usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya tụgharịrị: Mgbalị klaasị, ọchịchị aka ike, esemokwu, mmekpa ahụ, ime ihe ike, efu, mpụ. Nkwado nke ikike, ikike aghụghọ-sayensị nke Darwinism na agbụrụ, agha ndị colonial na narị afọ gara aga, nkụda mmụọ nke Enlightenment, Agha Iwa Mbụ na II, agha ndị dị ugbu a ... ihe niile yiri ka ọ na-eduga na enweghị nchekwube banyere nhọrọ nke ụkpụrụ ụwa.
Oge a puputara ikike ojoo. Okwenye nke omenala nke onwu. Owu-owu. Ebumnuche nke mba nke French mara ihe na mbụ na-eme ka ndị mmadụ dịrị n'otu, ala, njikọta ọchịchị. Ejiri otu asusu, otu akuko. Ihe niile ghọrọ ihe echiche na-akpata nkewa na nkewa, nke mba, nke ọgbụgba ndụ egwu.
Anyị na-ekwuputa: N'ịgbaghara nsogbu sayensị, mpụ a haziri ahazi, mbibi gburugburu ebe obibi, okpomoku ikuku; Anyị na-ekwuwapụta na ahụike nke otu mmadụ na gburugburu ya dabere na anyị, ka anyị kwanyere mkpokọta nke ndị dị ndụ, ụmụ nwoke, anụmanụ na osisi wee mee ka anyị nwee nchekasị maka nchekwa nke mmiri, ikuku na ala ”, ihe okike dị ebube nke okike.
Ee, ụwa ọzọ ụkpụrụ omume jupụtara fraternity, ibikọ ọnụ na udo ga-ekwe omume! Enwere ike ịchọta ụkpụrụ nke ụkpụrụ omume dị iche iche iji mepụta omume omume nke agwa gafere ụwa niile. Usoro ohuru zuru ụwa ọnụ nke ịdị n'otu n'etiti ndị dị iche iche dị iche iche, morphology yiri ya na ohere nke ịdị ukwuu nke ime mmụọ iji chọpụta ihe ga-ekwe omume na nsogbu nke ụwa.
Otu mmeghari zuru ụwa ọnụ ga-emerịrị njikọta nghọta, udo, imekọrita, ọbụbụenyi na ịhụnanya. Anyi aghaghi ikpe ekpere ma rọọ nrọ n'ime obodo.
Politicalkpụrụ omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị: Ndị ọka mmụta nke okike na mmụọ ga-adịrị ndị gọọmentị ọdụ, nke mere na arụmụka nke echiche ụkpụrụ bụ ihe ndabere nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mba ha, ókèala ha, mpaghara ha ”. Ọzọkwa ndị ọkà mmụta banyere mmadụ na ndị na-amụ banyere ụkpụrụ ndụ na-adụ ọdụ ka nsonye, ​​nnabata na nsọpụrụ maka iche iche na ugwu nke mmadụ nke agbụrụ niile ga-ekwe omume.
Ngwọta oge: Ọ dị mkpa iji mee ka udo dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nweta ikpe ziri ezi nke ụwa na ụwa. Lebara okwu niile metụtara ụkpụrụ omume anya na esemokwu udo, ọgụ ọgụ na-adịghị ọgụ nke echiche, na-ewepụ agbụrụ aka.
Nkwupụta Postmodern: Nghọta n'etiti ndị dị iche iche nke mba dị iche iche, echiche, okpukpe na-enweghị ịkpa oke ọ bụla dị mkpa. Gbochie nwa amaala ọ bụla ịgbaso usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị-nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ijikọ ọnụ na mkpesa mkpokọta oge maka ime ihe ike. Mepụta netwọọdụ ozi gbasara ụkpụrụ omume zuru ụwa ọnụ na karịa ihe niile: kụọ ọmarịcha ịdị mma!
Marchwa Machị: Ebe ọ bụ na ọ nweghị onye gbanahụ njikọta echiche, anyị nweere onwe anyị ịhọrọ ịchọ ọdịmma onwe ma ọ bụ ịdị mma, dabere na etu anyị si emeghachi omume na usoro ụkpụrụ dị iche iche; ya mere oke mkpa nke Great World March nke ndị mmadụ mba ụwa haziri, maka oge a na mbido narị afọ ọhụrụ, kpọmkwem mgbe esemokwu dị na Bolivia anyị na mba ụmụnna na-abawanye.
Anyị malitere njem ụwa, nke ukwu, nke ukwu, nke anụ ahụ na mkpụrụ obi, na-ezipụta ozi udo na mpaghara niile na mba niile ruo mgbe anyị rutere Punta de Vacas na Mendoza Argentina n'ụkwụ Aconcagua ebe anyị gbakọtara ọnụ anyị ga-emechi nkwa nke ọgbọ na nwanne. Mgbe niile soro SILO, onye amụma mmadụ.
Jallalla! (Aymara) -Kausáchun! (Qhëshwa) -Viva! (Spanish)
Khúyay! -Kusíkuy! Joy! -Rụrị ọiceụ! -Munakuy! Hụ onwe unu n'anya!
SENATOR NKE ỌG TOG TO NA ỌR SO ỌH HR H HMUM ỌRUM
COCHABAMBA BOLIVIA OKTOBA 2009
Anyị na-ekele Julio Lumbreras, dị ka ezigbo onye maara Dr. Gastón Cornejo, maka nkwado ya na nkwadebe nke isiokwu a.
Categories Pịa Ihe edeturu, Uncategorized Igodo bọtịnụ
Ekwuputara ụbọchị atọ nke ụwa
Na-eche ọdịnihu na-enweghị ngwa agha nuklia
1 kwuru na «Tribute to Gastón Cornejo Bascopé»
08/10/2020 na 18:22
Nke a bụ Dr. Cornejo, nwoke na-eguzosi ike n'ezi ihe, jupụtara n'ịhụnanya na okwukwe
Deja un comentario Kagbuo azịza
aha correo electrónico web
ike 2021 (1)
ike 2020 (1)
ike 2019 (2)
Akwụkwọ ozi na ịdị n'otu na ndị Colombia
CYBERFESTIVAL Na ngwá agha nuklia
Banyere ikike nke TPAN
© 2021 Haziri 4P Marketing